Torohevitra momba ny telecommuting velona | Bezzia
Torohevitra momba ny fifandraisan-davitra velona
Maria vazquez | 15/09/2021 10:00 | Vehivavy mpanatanteraka
Nanova ny fahazaranay maro ny areti-mandringana. Mandritra ny fotoana nitazomana dia maro aminareo no tsy maintsy miasa any an-trano ary azoko antoka fa tsy ianareo rehetra no hanana ny any amin'ny birao raha vantany vao vita io. Izany no antony nieritreretantsika ny sasany torohevitra momba ny fifandraisan-davitra mbola velona mety hahasoa anao izy ireo.
Ny teleworking dia manana tombony azontsika rehetra jerena: mitsitsikitsika amin'ny dia isika ary mankafy kokoa ny fanalefahana fotoana bebe kokoa. Na izany aza, isika irery izay efa nandefa telecommuting nandritra ny taona maro fantatray koa ny fahasahiranan'izy ireo. Niaina azy ireo izahay ary nahita fitaovana tena ilaina handresena azy ireo.
1 Mametraha fetra amin'ny andro fiasana
2 Mamorona "mode" miasa
3 Ampianaro ny fianakaviana
4 Alamino ny fandaharam-potoananao
5 Mivoaha amin'ny trano
Mametraha fetra amin'ny andro fiasana
Mianara mifehy fotoana fanalahidy io rehefa telecommuting. Ny zava-misy amin'ny fananana fotoana misimisy kokoa sy ny birao an-trano dia afaka mamporisika antsika hanitatra ny ora fiasantsika, na satria mangataka andro isika, na satria rehefa vita ny asa dia alaim-panahy hanohy hamaly mailaka izahay.
Mametraha fetra amin'ny ora fiasanay ao an-trano dia zava-dehibe izany mba tsy hanana 24 ora ny androntsika. Raha tsy mametraka fandaharam-potoana ho anao any am-piasana izy ireo fa mametraka tanjona, ferana ny ora. Manapaha hevitra manomboka amin'ny ora sy ora firy ianao no miasa ary rehefa avy miala sasatra. Raha te hahomby ianao ary mitazona fifandanjana eo amin'ny asanao sy ny fiainam-pianakaviananao dia tokony hianatra ny hiala amin'ny asa ianao ary hanaja ny ora fialan-tsasatrao.
Mamorona "mode" miasa
Rehefa manomboka telecommute ny olona iray, ny fakam-panahy dia mahatonga ny olona iray hamoy izany filana akanjo izany handeha hiasa. Matetika dia lesoka voalohany mampifandray olona maro hafa. Ary ny fahatafitana velona amin'ny fifandraisan-davitra dia lakilen'ny fampidirana fahazarana mahatonga antsika midira amin'ny fomba fiasa.
Manavaka ny fomba fiasa amin'ny fomba fianankaviana io no lakilen'ny fiasan'ny lohantsika araka ny tokony ho izy. Mba hanabeazana ihany koa ny ankohonantsika, raha manana isika, ny amin'ny fotoana tokony na tokony tsy hanelingelenany anay. Misafidiana toerana hiasana Izay ampiasainao fotsiny rehefa miasa sy miakanjo ianao toa ny olona mety miseho ao an-tranonao amin'ny fotoana rehetra. Mifantoha amin'ny asanao raha mbola ilaina ary avy eo hadino izany toerana izany na angony ny fitaovanao miasa ao anaty lalimoara ary ataovy izay hahazoanao aina.
Ampianaro ny fianakaviana
Rehefa tsy mbola nisy olona tao an-trano nandefa telefaona talohan'izay dia voatery manao fomba vaovao ny fianakaviana iray manontolo. Ary ny fiovana rehetra amin'ny fahazarana sy ny mahazatra mitaky fe-potoana fampifanarahana. Ny firesahana amin'ny fianakavianay, ny fanazavàna ny fandaharam-potoananay ary na dia ao an-trano aza ianao dia tsy ho afaka hisokatra mandra-pahatapitry ny andronao dia lakilen'ny fanombohana tsara.
Ny fakam-panahy Hanasa ny fianakavianao hanelingelina anao amin'ny andro voalohany mandritra ny asanao izany ary ianao hanatrika ireo raharaha ao an-trano izay afaka miandry na mankafy fahafinaretana sasany izay tsy azonao idirana amin'ny birao. Lojika ny variana mandritra ny herinandro voalohany, ka mandritra io fotoana io dia zava-dehibe kokoa ny hamafisanao ary raha misy olona ao an-trano ianao mandritra ny fotoana iasanao dia afaka mampitandrina anao izy ireo rehefa variana ianao, fiaraha-miasa! Raha vantany vao zatra an'io ianareo rehetra ary tafiditra ao anaty ny fanazaran-tena vaovao, dia ho mora kokoa ny zava-drehetra ary afaka mifandefitra ianao.
Alamino ny fandaharam-potoananao
Raha nitondra fandaharam-potoana ianao rehefa nankany amin'ny birao, maninona no hijanona izao? Arindrao ny fandaharam-potoanao toy ny nataonao teo aloha ary avereno jerena isa-maraina ny lahasa, ataovy lohalaharana ireo zava-dehibe indrindra. Soraty manomboka amin'ny ora firy sy amin'ny ora hiasanao, amin'ny ora atokanao amin'ny mitataovovonana hihinanana sy hialana sasatra ... Azonao atao ny mampiasa azy io amin'ny alàlan'ny fandaharam-potoana amin'ny taratasy, ny kalandrie Google na fampiharana tsotra sy intuitive toa ny Todoist.
Mivoaha amin'ny trano
Rehefa telecommute isika dia very ny lafiny ara-tsosialy mankany amin'ny birao, miresaka amin'ny mpiara-miasa na manao kafe amin'izy ireo eny am-pivoahana. Ny inertia dia mety manosika antsika hijanona ao an-trano aorian'ny asa ary ny fanoherana dia tena ilaina mba ho tafavoaka velona amin'ny fifandraisan-davitra. Rehefa mandefa telefaona ianao dia zava-dehibe kokoa raha azo atao mihaona amin'ny namana, mandray anjara amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny ekipa, mivoaha misakafo na mitsangatsangana amin'ny faran'ny herinandro ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Vehivavy mpanatanteraka » Torohevitra momba ny fifandraisan-davitra velona
Fomba fanosorana ny mena raha ny tarehinao
Inona no atao hoe positivism ara-nofo